Fitsapana Mycotoxin - BALLYA
Kitapo fitsapana haingana an'ny Ochratoxin ho an'ny labiera sy divay
Ochratoxine mycotoxin iray hafa izay nahasarika ny sain'ny olona manerantany taorian'ny aflatoxin.
Ochratoxin Fitsapana haingana ho an'ny menaka fihinana
Ochratoxine A no poizina manan-danja indrindra ao amin'ny fianakaviana ochratoxin. Izy io dia novokarin'ny karazana Aspergillus (Aspergillus) sy Penicillium (Penicillium verruca).
Kitapo fitsapana haingana Zearalenone
Zearalenone, fantatra ihany koa amin'ny hoe poizina F-2, dia natokana voalohany tamin'ny katsaka misy gibberellosis.
T2 Kitapo fitsapana
Ao Mucor, voajanahary amin'ny sakafo sy ny sakafo, Poizina T-2 dia metabolite faharoa an'ny holatra cytotoxic novokarin'ny karazana Fusarium isan-karazany.
Kitapo fitsapana Aflatoxin B1
Aflatoksin B1 dia aflatoxine novokarin'i Aspergillus flavus sy A. parasalty.
Kitapo fitsapana haingana an'ny Deoxynivalenol (DON)
Deoxynivalenol (DON) dia iray amin'ireo mycotoxins marobe novokarin'ny karazana Fusarium sasany
Ny singa lehibe an'ny vomitoxine dia DON (deoxynivalenol, deoxynivalenol), izay an'ny vondrona monomyxins.
Inona ny mycotoxins？
Famaritana ny mycotoxins
Mycotoxins ny metabolita misy poizina vokarin'ny bobongolo ao anaty sakafo maloto no tena ilazany azy. Afaka miditra amin'ny alàlan'ny olombelona sy ny biby izy ireo sakafo na sakafo, miteraka fanapoizinana maranitra na maharitra ho an'ny olona sy ny biby, ary ny fahasimban'ny aty, ny voa, ary ny hozatry ny vatana. Tavy hematopoietika sy tavy amin'ny hoditra.
Raha ny statistika dia misy mycotoxins 300 mahery fantatra, ary ny poizina iraisana dia:
Aflatoksin, Zearalenone / F2 Toxine (ZEN / ZON, Zearalenone)
Ochratoxine, Poizina T2 (Trichothecenes)
Mandoa poizina / deoxynivalenol (DON, deoxynivalenol)
Fumonisins / fumonisins (ao anatin'izany ny Fumonisins B1, B2, B3)
Ny bobongolo dia karazana holatra iray, izay mampiavaka ny mycelium somary mandroso ary tsy misy vatana mamoa be. Toy ny holatra hafa, izy io koa dia manana rindrin'ny sela, fomba velona na parasitika na saprophytic. Ny bobongolo sasany dia manova ny sakafo ho lasa poizina misy poizina, ary ny sasany mety mamoaka poizina amin'ny sakafo, izany hoe mycotoxins. Hatramin'ny nahitana aflatoxin, ny fahalotoan'ny sakafo tamin'ny bobongolo sy ny mycotoxins dia nahasarika ny saina hatrany. Izy io dia miteraka fahavoazana lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​izay miseho indrindra amin'ny fanapoizinana maharitra, fihenan'ny homamiadana, teratogenika ary mutagenika.
Aorian'ny fandotoana dia manimba ny sakafo sy mamokatra poizina, raha ny fihinan'ny olona ny sakafo toy izany dia mety miteraka fahasimbana isan-karazany amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​antsoina hoe fanapoizinana mycotoxins.
Ny fanapoizinana mycotoxin tery dia midika fa ny holatra mpamokatra poizina dia mihanaka amin'ny sakafo na ny sakafo, mamokatra metabolita misy poizina amin'ny toe-javatra mety, ary miteraka fanapoizinana rehefa lanin'ny olona sy ny biby.
Ny fanapoizinana mycotoxin amin'ny heviny malalaka dia misy ireo izay nihinana mycotoxins na fanapoizinana vokatry ny sakafo (feed) voaloton'ny mycotoxins.
Misy soritr'aretina telo lehibe amin'ny fanapoizinana bobongolo olombelona:
1. Raha misy fanapoizinana bobongolo, ny moka am-bava, ny vavony ary ny fery amin'ny tsinay dia hitranga amin'ny vorona. Asidra hydrochloric be dia be no hafenina ao amin'ny sela parietal gastric aorian'ny aretina, izay hitarika ny fisian'ny adenitis.
2, ny poizina entin'ny vavonin'ny fandevonan-kanina dia simba indrindra amin'ny atiny, ka rehefa misy poizina bobongolo dia mety hiteraka fivontosan'ny atiny, mainty, na fandehanan-dra.
3. Ny fanapoizinana ara-pahavoazana dia mety hiteraka fiovana na fanimbana ny taovan'ilay biby. Ny toe-javatra mahatsiravina dia mety hitarika ho amin'ny fahafatesan'ny biby koa ny hery fiarovan'ny.
Ny fitsaboana ireo olona efa tratry ny tabilao sy mycotoxins mety misy poizina azo avy amin'ny bobongolo dia mety ahitana fitsaboana oxygen, immunotherapy, detoxification therapy, fitsaboana otrikaina ary immunotherapy hanatsarana sy hifehy ny hery fiarovana.
Ny mycotoxins dia fahita indrindra amin'ireo sakafo ireo
Mycotoxins amin'ny sakafo
Rehefa mety ny toetry ny tontolo iainana, toy ny mari-pana sy ny hamandoana avo kokoa, dia mety hisy ny sakafo bobongolo. Valim-pikarohana marobe no naneho fa ny mycotoxins dia hita tamin'ny sakafo sy vokatra voahodina toy ny serealy efa be mpampiasa, zavatra vita amin'ny ronono, sakafo masirasira sy sakafom-biby. Ny karazana holatra samihafa dia mora ateraka amin'ny sakafo isan-karazany.
Ny fitomboan'ny bobongolo dia misy fiatraikany amin'ny antony maro, ny tena zava-dehibe dia ny fiasan'ny rano. Ny hetsiky ny rano amin'ny fambolena vokatra ary ny voankazo sy legioma voatahiry dia ampy hitazomana ny fitomboan'ny bobongolo, raha ny serealy sy ny vokatra serealy kosa dia tsy afaka mitazona ny fitomboan'ny bobongolo noho ny hamandoana kely fitehirizana. Izany no mahatonga ny serealy ampiasaina ho sakafo fototra sy sakafo voatahiry. Na izany aza, raha misy hetsiky ny rano ny serealy> 0.65, dia mety hitombo sy hiteraka koa ny bobongolo. Matetika ny bobongolo dia manafika fitaovan'ny sakafo ary miharatsy ny akora, ary ny bobongolo dia hita amin'ny sakafo.
Mycotoxins amin'ny kafe
Ny Ochratoxin A dia miparitaka manerana ny tontolo voajanahary. Karazan-javamaniry sy sakafo isan-karazany toy ny voa, kafe, dite, sns. dia mety voaloton'ny ochratoxin A. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny ochratoxin Ny fahalotoana amin'ny kafe eo noho eo vita amin'ny tsaramaso kafe madio dia ambany dia ambany (fanamiana 1.1 μg / kg), raha ochratoxin kosa dia fandotoana ao anaty kafe eo noho eo izay ampidinina kafe. somary avo kokoa ny akorandriaka. 5.9 μg / kg izy, ary 15.9 μg / kg ny mari-pahaizana avo indrindra
Mycotoxins amin'ny katsaka
Eo ambanin'ny hamandoana sy ny mari-pana avo lenta, ny katsaka matetika no substrate amin'ny fitomboan'ny bobongolo sy ny fiterahana ka mahatonga azy hamokatra mycotoxins. Eo ambanin'ny hamandoana sy ny mari-pana avo lenta, ny katsaka matetika no substrate amin'ny fitomboan'ny bobongolo sy ny fiterahana ka mahatonga azy hamokatra mycotoxins. Ny bobongolo katsaka dia ho voaloton'ny metabolites-mycotoxins bobongolo, toy ny aflatoxin, poizina mandoa, poizina T-2, fumagillin, ochratoxin, sns. ka ny fanodinana sy ny fahandroana tsotra dia sarotra ny manafoana ny manimba ny mycotoxins amin'ny biby fiompy sy akoho amam-borona ary ny olombelona.
Ny fomba fampiasa matetika amin'ny detection mycotoxin Dia ireto manaraka ireto:
Ny fomba TLC dia mikendry santionany samihafa. Ny mycotoxin dia nalaina avy tamin'ny santionany tamin'ny solvent fanalana mety, nodiovin'ny chromatography amin'ny tsanganana, ary avy eo nitarina sy nosarahana tamin'ny chromatography sosona manify. Ny fluorescence an'ny mycotoxins dia ampiasaina hamaritana ny atiny farafahakeliny amin'ny fampitahana ny heriny sy ny fenitra. Ny fanomanana santionany TLC dia manahirana, ary ny vokatra fanonganana sy fanadiovana dia tsy mety. Betsaka ny fahalotoana amin'ny vahaolana fitrandrahana, izay misy fiantraikany amin'ny hamafin'ny fluoresence amin'ireo teboka mandritra ny fanitarana.
Chromatography, anisan'izany ny chromatography sosona manify, chromatography entona, ary chromatography ranon-javatra, no fomba fandinihana simika tena ilaina indrindra ho an'ny mycotoxins. Ny fomba mahazatra kokoa amin'ny famakafakana ny mycotoxins dia ny chromatography ranoka, ao anatin'izany ny chromatography-spectrometry faobe. Ity fomba ity dia haingana sy marina, fa mitaky fitaovana sy fitaovana lafo vidy. Izy io dia voafetra ihany amin'ny fidiran'ny andrana andrana matihanina amin'ny fikarohana siantifika, fanadihadiana, famakafakana ary fanaraha-maso. Tsy dia be mpampiasa eo amin'ny orinasa sy ny eny ifotony. Ambonin'izany, ny fiatraikan'ny vokatra vokariny dia nampihena be ny vokatry ny tari-dalana momba ny famokarana.
3. Fomba fitadiavana immunochemical: (immunochromatography volamena koloidialy, fitsapana fanefitra amin'ny hery enzim-bery):
Ny fomba fitadiavana immunolojika dia fomba famakafakana biokimika mifototra amin'ny fihenan-tsafidy mifantina eo amin'ny antibodies sy antigens na haptens. Matetika dia voafantina avo sy voafetra ny fatran'ny detection. Ampiasaina be izy io amin'ny famaritana antigen, semi-antibodies na antibodies isan-karazany. Amin'ny ankapobeny dia azo zaraina ho immunoassay fluorescent izy io.
Fitsapana ny urine mycotoxin
Ny mpanelanelana fanandramana mycotoxin tsara indrindra dia ny urine, satria miangona ny mycotoxins ao amin'ny aty sy ny voa. Ka ny fitsapana ny urine dia mora kokoa ihany koa ary tsy dia manafika.
Mycotoxins dia singa fanoherana ny sakafo misy amin'ny feed sy ny akora, ary metabolite faharoa an'ny mycotoxins mahery. Ny mycotoxins dia novokarina nandritra ny fanodinana, ny fitaterana ary ny fitahirizana sakafo. Tokony holazaina fa tsy misy toerana eto amin'izao tontolo izao afa-mandositra ny fahalotoan'ny bobongolo. Ny mycotoxins dia tena manimba ny vatan'olombelona, ​​ary ny fifandraisana mivantana amin'ny mycotoxins dia tokony hialana faran'izay betsaka araka izay azo atao, noho izany dia zava-dehibe indrindra ny fisorohana sy ny fitadiavana mycotoxins amin'ny sakafo. Ballya manome a karazana kitam-pikarohana haingana mycotoxin, ny valim-pitsikilovana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny Vondrona Eropeana, tsy ny fandidiana tsotra ihany, fa ny haingana sy ny marina ihany koa. BALLYA koa dia mamokatra fitsapana haingana hafa miorina amin'ny immunochromatography.